SPY117 - fakantsary OMG maivana miafina miafina fakan-tsarimihetsika fakan-tsarimihetsika 1080P Kamera maivana tena izy - Vahaolana OMG
SPY117 - Fakan-tsary OMG Lighter miafina fakan-tsary mpitsikilo hd 1080P Kamera maivana kokoa
Ny HD tsy misy fakan-tsary mibaribary manana famaritana fakan-tsary, horonam-peo sy horonam-peo, fahitalavitra mandeha fiara, fivoahana manaitaitra, U disk-ny asa. HD 1920 * 1080P piksela, tsy misy fakantsary miafina miafina, bokotra miafina, azo zarazara kokoa ny singa kokoa.
Ny endriny tsara tarehy, maivana kokoa ny vatana ary toy ny jiro tsotra ihany. Raha mampiasa ity vokatra ity ianao dia araho ny torolàlana ao amin'ny boky torolàlana.
Ireo toe-javatra ilana fisainana:
1. Alohan'ny fampiasana dia omeo antoka fa hiditra ny karatra memwa TF.
2. Mandritra ny fakantsary, azafady mba tsindrio ny fampiasana azy kokoa. Raha asiana fanindroany, dia hajanona ilay kamera.
3. Azafady aza tsindrio ny asan'ny hazavana maivana lava, ny hafanan'ny tariby fanafanana lava be loatra, dia hisy fiantraikany amin'ny ain'ny serivisy.
4. Nipoitra ny fakantsary, azafady azafady ny fanalahidy famerenana hamerenana.
5. Tsy voampanga ilay fiarandalamby, azafady mba amporisiho ara-potoana mba hahazoana antoka ny hery ampy.
6. Rehefa tapitra ny boot dia tsy manatanteraka ny fandidiana fakantsary, eo amin'ny 1 minitra aorian'ny fanakatonana ny milina automatique.
7. USB interface ahafahana mampifandray ny ordinatera hamaky ny horonantsary video, ny tokony hanakatonana.
Lahatsary: AVI Video coding M-JPEG
Sarin'ny horonan-tsary: 30fps
Sarimihetsika sary: JPG
Support System: Windows ahy / 2000 / xp / 2003 / vista
Fotoana fiasana: Momba ny ora 1 Charge Voltage DC-5V
Karazana bateria: Lithium batterie lithium ambony
Karazana fitaovana: Mini USB 8 Pin
Karazana karazana: Karatra kely TF Max 32GB (SD Card tsy tafiditra)
4.6 X 3.4 X 1.4 santimetatra
SPY117 - Kitapo fakantsary maivana kokoa
4336 Total Views 1 Views Today